Amathuluzi we-Dingzhou Gemlight Cutting Co., Ltd., yasungulwa ngonyaka we-1990, iyinkampani yokukhiqiza amathuluzi epulazi nengadi yesimanje, ifektri ezinze edolobheni laseDingzhou, maphakathi nesifundazwe saseHebei, inhliziyo yensimbi yomhlaba. I-Gemlight igxile kumathuluzi wokuqamba nokukhiqiza kanye nama-wire meshes.
Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-30 kumathuluzi engadi, amathuluzi epulazi kanye nocingo locingo. Ngaphezulu kweminyaka engama-26 yesipiliyoni kumathuluzi esandla engadi, ipulazi nentambo yocingo, i-Gemlight Cutting Tools ithuthukise umugqa wokukhiqiza osezingeni eliphakeme ohlanganisa ukunyathela, ukwelashwa kokushisa, ukudweba nokuhlangana ngaphansi kophahla olulodwa. Singakwazi ukulawula ikhwalithi yethuluzi ngalinye zisuka nje. Imikhiqizo yethu ine-SGS kanye nokugunyazwa kwe-intertek yesiqinisekiso sakho. I-ISO9001: 2015 idlulile.
Amathuluzi we-4 Million ne-Wire mesh Kukhiqizwe Ngonyaka futhi kuthengiselwe umhlaba wonke.
Ifektri yethu engama-32000sqm, enesistimu yokulawulwa kokushisa okuhlakaniphile, kanye nomshini wokushaya umoya womoya, isiqinisekiso seGemlight wonke amathuluzi nekhwalithi yocingo, futhi namandla okukhiqiza amathuluzi ayisigidi esingu-4. Ungathola amathuluzi ethu e-USA, Mexico, Kenya, Uganda naseNigeria, Slovenia, Poland njll. Ngesikhathi esifanayo, izinsizakalo ze-ODM ne-OEM zinikezwa ukuhlangabezana nesicelo sakho nokwaneliseka.
UMSEBENZI WOKUMAKetha KOMHLABA WONKE
Ezimakethe zaphesheya kwezilwandle, iGemlight izosungula inethiwekhi yesevisi yokuthengisa evuthiwe emazweni angaphezu kwezi-100 nezifunda emhlabeni jikelele.
IGemlight isiphenduke isithekelisi esikhulu kunazo zonke seMachete namanye amathuluzi okulima ingadi eChina.
"Ucelemba muhle kakhulu. UMnu. John muhle kakhulu. Siyakujabulela ukusebenza naye. Usiza kakhulu futhi wehlise umoya. Ngifisa ukuthi ngi-oda maduze iziqukathi ezintsha futhi nekhwalithi muhle kakhulu. Ngiyethemba ukubona ukuxhumana okuzayo ngokuzayo."
"Michelle, nginokuphakelwa okusha maqondana noMachetes. Manje usuneqembu elingcono kakhulu. UJohn no-Amanda banobungcweti futhi banekhono. Bayasiqonda isicelo futhi baphendule ngesikhathi nangokuqiniseka. Siyakuhalalisela! Impela nawe unolwazi futhi uyaqonda imikhiqizo yakho futhi ukhangisa kakhulu. "
"U-Aisha, Njengenjwayelo ukulethwa kwamakhasimende enu kuhle kakhulu. Nina bafana beniziphethe kahle futhi uma kwenzeka sidinga ukudonsa isigameko nizoba yifoni yethu yokuqala."
Ikhwalithi ethembekile, Intengo Ehamba phambili, kanye nokulethwa okusheshayo!